Mourinho oo weeraray masuuliyiinta Manchester United kahor kulanka berri – Gool FM
(Manchester) 09 sebt 2016. Tababaraha Manchester United Jose Mourinho ayaa su’aal saaran sababta ciyaaryahanadiisa ka soo jeeda koonfurta America ay socdaalkii ay dib ugu soo laabanayeen England uga adkeyd marka lala bar bar dhigo kuwa Manchester City.
Antonio Valencia, Sergio Romero and Marcos Rojo ayaa kulamadii xulalkooda ka soo qeyb galay kahor inta aysan soo laaban kahor kulanka Manchester Derby.
Mourinho waxa uu sheegay in ciyaaryahanada City Nicolas Otamendi iyo Pablo Zabaleta ay durbadiiba soo laabteen kaddib kulamadii Argentina, taas hada faa’ido iyaga u ah.
Waxa uu wariyeyaasha u sheegay: “Antonio Valencia dhib ayey ku noqotay in uu diyaarad toos ah u helo Madrid. Sergio Romero iyo Marcos Rojo daafaha caalamka ayey soo mareen, Venezuela, Argentina hadana Europe.
“Mancehster City lacag ayey u adeegsatay siay duullimaad toos ah u helaan – ama waxa ay u direen diyaaradda milkiilaha. Wiilasheena saaka ayey yimaadeen si ay u tababartaan.”
Muxuu Jose Mourinho ka yiri kulanka Manchester Derby ee berrito ay kooxdiisa Man United oo dhowaynayso Man City?